Ọkammụta Ụzọchukwu Eguzobela Òtù Nkwàdo Agụmakwụkwọ, Bipụta Akwụkwọ Ọhụụ
Previous Article Obianọ Anabata Ndị Nkuzi Na Ụmụakwụkọ Tuuru Ùgo n'Asọmpi
Next Article Ofumelụ Achịkọbara Asọmpi Nkwàlite Mmụta n'Ayamelụm
Igbo sị na ọ na-abụ dike leghachi anya azụ ebe ọ malitere kpaba ike, ọ jaa onwe ya ike; maka na ihe e mèrè mete ya mma na-adị mma ítò, tòté ya mma.
Ọ kpọtụrụ akpọtụ nnọọ ma zụọ azụọ n'isi ngwụcha izu ụka gara aga n'Ebenatọ dị n'okpuru ọchịchị 'Nnewi South' nke steeti Anambra, dịka nwa amadi mbụ n'obodo ahụ na gburugbúrù ya ruru n'ogoogo ọkammụta, bụ Ọkammụta Sam Ụzọchukwu mèrùbèrè oke mmemme atọ n'otù ụbọchị, bụ mmemme ncheta ọgbụgba ahọ iri ise ya na oriakụ ya bụ Lọọlọ Grace Ụzọchukwu jìrì biri, mmemme igùzòbe òtù enyemaka nkwàdo agụmakwụkwọ, na mmemme iweputa akwụkwọ nkọwa onwe ọhụụ o dèrè bànyere onwe ya, bụ nke nwa bèkee kpọrọ 'autobiography'.
Oke mmemme ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ obibi ọkammụta ahụ bụ nke dọtara imirikiti ụmụafọ obodo ahụ, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ sitere ebe dị iche iche na steeti Anambra na mpụga ya, wee bịa ịsòrò ya na ezi na ụlọ ya ñụrịa.
Na nkenke okwuchukwu ya n'òfùfè nrò pụrụ iche a chịkọbara bànyere mmemme ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ụka 'St. Matthew's Catholic Church' dị n'Ebenatọ; onyeisi ụkà Katọliikì na Dayọsiisi Nnewi, bụ Bishọọpụ Ọdịlị Okeke kọwàrà alụmdinanwunye dịka ihe Chineke onwe ya jiri aka ya kwàdo, ma sị na ọ bụ ọnụnọ Chineke n'ezinụlọ, ya na ntụkwàsị obi na nnagide n'etiti di na nwunyè na-eme ka ezinụlọ na mbikọ nwoke na nwunye ya gaa nke ọma, dị n'udo, ma nọtekwa aka. Ọ sịkwazị na ọ bụ enweghị ihe ndị a n'ezinụlọ na-eme ọtụtụ alụụdinanwunye ejighị anọte aka, wee kpọụ afọ n'ala.
Ka ọ na-ekèle Chineke maka ndụ dị na nwunye ahụ na ụmụ ha, ya bụ nnukwu onyeozi Chineke kpọkùrù ha ka jisie ike n'inwe ntụkwàsị obi na mmụọ nnagide, ọbụnadị dịka ọ kpọkùrù ọtụtụ ezinụlọ ka ha ñòmie ezi akparamagwa ndị ahụ, ma kwekwa ka Chineke wère ọnọdụ n'ezinụlọ ahụ, iji mee ka alụmdinanwunye ha bụrụ sọ ụtọ ma nọtèkwa aka.
Oge ọ na-egbuchàpụrụ Ọkammụta Ụzọchukwu maka ogoogo o rùgòrò n'agụmakwụkwọ nakwa ihe dị iche iche o mepụtagoro na ngalaba mmụta, Bishọọpụ Okeke bùnyèkwara ya bụ agụnwoke ụkpa ekele maka ịhụta mkpa ọ dị na ọ ga-enyeghàchikwa gburugburu ya, site n'iguzobe òtù nkwado agụmakwụkwọ ahụ, iji nyere ndị enweghị onye ga-azụ ha aka ịga n'ihu n'agụmakwụkwọ ha, ọ kachasị n'ogo mmụta dị elu. Ọ kpọkùzịkwara ndị ọzọ bụ ndị aka ji àkụ ka ha ñomie ụdịrị ọmarịcha afọ òfùfò ahụ, site n'iji akụnụba ha jeere Chineke na mmadụ ozi.
N'okwu nke, oke mmadụ ahụ bụ isi a hụrụ kwaba okpu na mmemme ahụ, bụ Ọkammụta Sam Ụzọchukwu, bụkwa onye mbụ ruru n'ogoogo ọkammụta na mpaghara Mbabese niile (Ebenatọ, Ezinifite, Akwaihedị, Ọsụmenyi na Ụtụ) kwùrù na ndụ ya niile jupụtara n'akụkọ ọgbụgba àmà, ma e leghàchi anya ebe na otu o siri màlite. O kelekwazịrị Chineke maka ihe ọ rụrụ na ndụ ya na ezinụlọ ya.
Dịka o siri kwuo, ihe abụọ kpaliri mmụọ ya o jiri guzobe òtù nkwado agụmakụkwọ ahụ, bụ nke ọ kpọrọ 'Prof. Sam Uzochukwu Tertiary Education Foundation' bụ (1) mmasị ya inyeghachi gburugburu ya, n'ihi na ya onwe ya ritàrà úrù n'ọtụtụ ohere agụmakwụkwọ n'efù na enyemaka ndị ọzọ dị otu ahụ n'oge nke ya, malite n'ogo Praịma wee ruo ka ọ gụchara mahadum ya; ya nà (2) mmasị ya iwechighàtà ùgwù na ọnọdụ dị ebube obodo ya bụ Ebenatọ nwèrè n'oge mbụ, site n'ịbụ obodo mbụ na mpaghara Mbanese ahụ nwere onye nkuzi a zụrụ àzụ, onye mbụ gụchara mahadum, dọkịta bekee, nakwa ọkammụta mbụ (bụ ya onwe ya).
O mere ka a mara na ịkwàlite ọnọdụ mmụta abụghị naanị ọrụ dịịrị gọọmenti ma ọ bụ otù onye, ma kpọkuzie ndị ọzọ Chineke jiri akụnụba gọzie, ya na ndị òtù dị iche iche ka kwàdo ụdị ọmarịcha atụmatụ dị otu ahụ, iji mee ka ụmụaka maara akwụkwọ mana ha enweghị onye nkwàdo nwee ike ịgụ akwụkwọ, ọbụnadị ruo n'ogoogo mahadum.
N'okwu ọ gwàrà ndn nta akụkọ, nwa mbụ ọkammụta Ụzọchukwu, bụ Maazị Emeka Ụzọchukwu kọwàra nnà ya dịka agụnwoke, kọwaa nne ya dịka agụnwaanyị, ma sịkwa na ihe mmemme niile ahụ màgbùrù onwe ya, n'ihi na nke ọbụla n'ime ya nwèchàra ihe mmụta dị na ya.
Ka ọ na-akpọpụtasị ezi akparamagwa dị iche iche ọ mụtara site n'alụmdinanwunye nne na nna ya kemgbe ahọ ole gara aga, Maazị Ụzọchukwu kwere nkwà na ya ga-eso nzọ-ụkwụ ha, ma gosipụtakwa ezi olileanya o nwere na bụ òtù nkwado agụmakwụkwọ ọhụụ nna ya gùzòbèrè ga-ehi ụdụ, mịta mkpụrụ a tụrụ anya n'aka ya, ma nwekwa ezi mmetụta zuru òkè na ndụ ụmụ mmadụ nakwa mpaghara ahụ niile, dịka ọ bụ ebumnobi e jiri guzobe ya.
Tupuu ụbọchị mmemme ahụ kpọnkwem, e buru ụzọ chịkọbara ndị ntorobịa sitere mpagara ime ogbe dị iche iche n'Ebenatọ asọmpi egwu ekere n'aha ọkammụta Sam Ụzọchukwu, bụkwa nke ndị mpaghara Uhuala nwetara mmeri na ya, site n'iji ọkpụ atọ wee gbalaa ndị Amakọm ikè elu, we sịkwa ha ladị mma, oge ha gbara egbe buru ọ laa.
Dịka akwụkwọ nkọwa onwe ọhụụ ahụ, nke a kpọrọ 'A Single Palmnut' siri kọwaa, a mụrụ Ọkammụta Samuel Udeziligbo Ụzọchukwu nye Maazị Alfred na Elizabeth Ụzọchukwu n'ahọ 1940. O deela ma bipụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma jiekwa ọtụtụ ọkwa, ma na ngalaba mmụta ma na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche.